Gorfeynta Buugga “Godob iyo Gallad” - WardheerNews
Gorfeynta Buugga “Godob iyo Gallad”
Qoraha Buugga: M. Cabdulle (Wadaad)
Gorfeyntii: Dr. Georgi Kapchits
“Godob iyo Gallad” waa qiso ka sheekeyneysa wixii ka dhacay magaalo hebla sanooyinkii toddobaatameeyadii ee qarnigii la soo dhaafay. Hase yeeshee in ay magaaladaasi ahayd Muqdisho shaki kuma jiro, maadaama si fudud loogu aqoonsan karo astaamo dhowr ah. Waxaa ka mid ah afguriga buuggani uu ku qoran yahay, ayna ku hadlaan dadka uu ku saabsan yahay.
Inkastoon ku hawlan ahay ururinta iyo baaritaanka maahmaahaha Soomaaliyeed muddo konon sano ah in ka badan, haddana qaar ka mid ah kuwii aan kula kulmay “Godob iyo Gallad” weligay iyo waaqay maan arag.
“Godob iyo Gallad” dulucdeeda haddii la soo koobo waa tan: laba wiil oo mid ka mid ahi uu reer magaal yahay, midka kalana uu miyi ka yimid oo intii la xiray ayaa lagu eedeeyey dembi aanay gelin oo ah in ay dileen gabar ay isku deyeen in ay kufsadaan. Wiilka reer magaalka ah aabbihiis aad buu u murugsanaa, mar hadduu garan waayay wuxuu u qaban kari lahaa wiilkiisa.
Tan iyo maalintii wiilkiisii la xiray aabbihiis waxaa ku dhacay belooyin kale oo farabbadan oo uu kuu caloolgubyooday: gurigiisii waa la dhacay, afadiisii waa ay ka taktay, shaqadiisiina waa ay ka luntay. Hase yeeshee gargaarkii uu ka helay laba qof oo hufan ayuu dib u soo noolaaday. Wiilkiisii waa la sii daayay, marwadiisii waa ay soo noqotay, shaqo ka wanaagsan tii laga eryay ayuu helay.
Taa waxaa weliba u sii dheer in “Godob iyo Gallad” aanay ku yarayn gefaf xarfo-qoraal ah oo dhibaya isha akhristaha kala garan og eray si sax ah u daabacan iyo mid dadbanba.
Inkastoo ay sidaasi tahay, haddana aad baan uga helay Xuseen M. Cabdulle (Wadaad) buuggiisa. Kaddib markii aan akhristay boggii ugu dambeeyey “Godob iyo Gallad” si uu madluni ku jirto baan isu iri: “Ninyohow, waa ay kuu dhammaatay booqashadii la-yaabka lahayd ee aad ku joogtay Muqdisho aadan hore u ogayn.”
Dr. Kapchits waa khabiir ku takhasusay luqadda Soomaaliga, waxa uuna qoray buuggaag iyo qoraallo tiro badan oo la xidhiidha Afka iyo Suugaanta Soomaaliyeed. Dr. Kapchits waxa uu aad isugu taxalujiyaa baadhista iyo ururinta sheekooyinka hiddaha iyo maahmaahyada Soomaaliyeed.